I-King Size Bedroom Enokungena Kwangasese kanye Nokugeza - I-Airbnb
I-King Size Bedroom Enokungena Kwangasese kanye Nokugeza
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Veronica
Igumbi elizimele elinendawo yokungena yangasese kanye nokugeza. Imizuzu emi-5 kuphela ukusuka e-Leavenworth, enye yezindawo eziyintandokazi zase-Washington. Kule ndawo, uzothola izinto zokuzilibazisa ezifana nokushushuluza, ukuhamba ngezinyawo kanye ne-rafting.
Chitha usuku e-Peshastin, lapho ungathola khona imibono emihle uma uhamba ngezinyawo e-Derby Canyon noma eduze nomfula i-Wenatchee.
ILeavenworth ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu eWashington. Idolobha elihle okufanele ulivakashele; trust me: ngeke uzisole!
Sinekamelo langasese elinombhede onethezekile we-KING SIZE, indawo yokungena empeleni iyimfihlo futhi itholakala ngemuva kwesokunxele sendlu. Awudingi ukubona umsingathi wakho ukuze ungene egumbini, uzonikezwa ikhodi ukuze uvule umnyango. Igumbi nalo linebhavu langasese.
Sicela uqaphele ukuthi indlu igcwele futhi ungase uzwe ngathi.
Siyazi ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho! Siyakwamukela ku-Peshastin!
4.85 · 60 okushiwo abanye
Sitholakala ku-US Highway 2, futhi sifinyelela kalula ezitolo nezinto ezihehayo.
I-Peshastin ne-Leavenworth zinikeza ukubukwa okumangalisa kakhulu ongake ukubone.
I-Leavenworth nayo idume kakhulu ngabathandi bangaphandle nezokungcebeleka bazo zonke izinhlobo. Kodwa akudingeki ukuba ube umsubathi onekhono noma uhambe kude kakhulu nemoto yakho ukuze ubalekele imisindo yedolobha futhi ujabulele konke okunikezwa yimvelo.
Umgwaqo onguthelawayeka 2 uhamba eduze komfula Wenatchee kanti, ngenkathi kunezindawo zokudonsa nezindawo ezincane zokupaka eduze komgwaqo, ungawela umfula e-Old Pipeline Bridge, endaweni ebizwa ngokuthi "i-Red Bridge" ngenxa yokubukeka kwaleli bhuloho eligqwalile. isakhiwo sensimbi. Kunendawo yokupaka eduze kwaleli bhuloho labahamba ngezinyawo kuphela futhi, lapho nje kolunye uhlangothi, imisindo yomgwaqo ivalwa ukuduma komfula oneziyaluyalu.
Nginikeza izivakashi zami indawo, kodwa uma udinga okuthile ngiyatholakala ukuze nginikeze usizo kukho konke ukuhlala kwakho.